Uluhlu lweGemology- Isichazi magama samagama anqabileyo
Kwiinkqubo ze-orthorhombic, monoclinic kunye ne-triclinic kukho ezintathu zeekristale zezembe zobude obahlukeneyo. Ukuphinda kabini ukwenzeka kuya kubakho kumacala amaninzi, kodwa kuya kubakho ii-axic optic (izikhombisi zokuphinda kubekanye) ezahlukileyo kubume bohlobo ngalunye lwe gem. izimbiwa zezinkqubo zaziwa ngokuba yi-biaxial. (Kwinkqubo ye-orthorhombic ii-axic optic zithambekele ngokulinganayo kwi 'c' (umgaqo othe nkqo othe nkqo), ngelixa kwi-monoclinic nakwi-triclinic kungekho buhlobo ngokuthe ngqo kunye nee-axis ze-crystal.)
Isiphumo sokubonakalisa ukusuka kufakelo olufanayo lwe-fibrous inclusions okanye (iliso lekati). Ukukhanya okukodwa kokukhanya kubonakala kwii-engile ezilungileyo kwicala lokufakwa kunye nokubonakala kakuhle phantsi komthombo omnye wokukhanya okuphezulu ngamatye asikwe en cabochon
(Iarhente yokufaka imibala). Inxalenye yemolekyuli inoxanduva lombala wekhompawundi. Ikhona njengeyona nto ibalulekileyo ekwakhiweni kwamachiza ngamatye e-idiochromatic okanye njengobungcola be-accidentai kumatye e-allochromatic
umbono ocacileyo wezinto ezinokukhanya ukukhanya okumhlophe (bomvu, orenji, tyheli, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, ne-violet) kunye nemvakalelo emfusa engafumanekiyo kubume belanga. Umbala uchazwa ngombala, ukugcwala kunye neethoni. Umbala womzimba welitye elinqabileyo uvela ekukhanyeni apho ubonwa khona kunye nangenxa yokufunxwa kobude obuthile bokukhanya okubonakalayo. Umbala unokubangelwa kukusasazeka, ukuphazamiseka kokukhanya kunye ne-fluorescence
Umthi-ofana nomoss-njengokuqhekeka kokuqhekeka (apho ukufakwa kwezinto ezahlukeneyo kunokugcwalisa ikhefu- ngesiqhelo intsimbi oxide.)
ukuphelisa ubukhazikhazi beglasi kunye notshintsho. (Kwimeko yemveliso yeglasi ebizwa ngokuba yi-meta jade- luphuculo lwe-incipient crystallization)
Ukusasazeka kukwahlukana (ukwahlukana) kokukhanya okumhlophe kwimibala ebonakalayo ngokubonisa (ukugoba kokukhanya) njengokukhanya kudlula kwimiphezulu emibini ethambekileyo. Kwiigugu zihlala zibizwa ngokuba 'ngumlilo'
i-anisotropic - iiminerals ezibonisa iipropathi zamehlo ezibonakalayo (umzekelo, amatye kwi-tetragonal, i-hexagonal trigonal, orthorhombic, monoclinic kunye ne-triclinic system)
Ubulukhuni ngamandla esimbiwa kufuneka sixhathise ukukrwempa (lingonakali). Jonga kwakhona isikali sika-Moh
umbala ubhekisa kwigama lombala ngokwawo: ucoceko olubonakalayo olubomvu, orenji, tyheli, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, violet kunye nokwahluka kwezi. I-Hue ikwabhekisa kwimvakalelo emfusa (phakathi kobomvu kunye no-violet), ongafumanekiyo kwilanga
Iiparele zamanzi amdaka ezingenzanga nucleated ezenza imollusk xa ibuyiselwa emanzini emva kokususwa kwesityalo seeperile ezingenantsingiselo. Oku akufuneki kubhidaniswe nembewu yeepea zaselwandle ezihlala zincinci kakhulu. Amanzi amatsha `keshi 'abizwa njalo ngokuba nawo akakhuliswanga kwinyukliya engeyiyo. Ngamanye amaxesha kubhekiswa njengeeperile 'ezingenambewu' ukwenza umahluko kunye ne-non-nucleated. Jonga kwakhona iiparele zeBiwa
imbewu yaseJapan ibiza iiparele `keshi '(poppies). Umbutho apha uphakathi kobukhulu obuncinci bembewu yepoppy kunye neeperile ezincinci ezenziwe ngokwendalo
Ixesha eliqhelekileyo lokukhutshwa kokukhanya okubandayo okubonakalayo 'xa kufunyanwa amandla entsalela ngohlobo oluthile okanye kwenye. Imigaqo emihlanu yeziganeko ezikhanyayo zezi: i-chemi-luminescence (isiphumo sokutshintsha kwemichiza), i-tribo-luminescence (eveliswe kukukhuhlana), i-thermo-luminescence (eveliswe bubushushu), ifoto¬luminescence (eveliswa yimitha ebonakalayo / engabonakaliyo yamandla aphezulu / amafutshane wavelength) kunye ne-cathodoluminescence (iziphumo zokonwaba ngomqadi we-elektroni kwigumbi elingena)
I-carat enye yeetriki = isinye kwisihlanu segram (0.20gr) okanye i-200 milligrams (mg). I-carat metric iyunithi yobunzima bamatye anqabileyo kunye neeperile ezicwangcisiweyo. Ubunzima buchazwa kwiindawo ezimbini zokugqibela kwaye iidesimali zihlala zibizwa ngokukhululekileyo 'ngamanqaku', okt 1 metric carat = 100 Amanqaku
Izinto ezazifakwe ngaphambili: ezazikhona ngaphambi kokuba ikristale yomamkeli iqale ukubumba kwaye yayifunxiwe 'ilungile yenziwe' kule yokugqibela (umz., amasuntswana aqinileyo kunye namakristali amancinci. Zithanda ukuba zisasazwe ngokungaqhelekanga kuyo yonke indawo kwaye kunqabile ukuba zihambelane nekristale ulwakhiwo
i-pseudomorph (ifom engeyiyo) yiminerali ethatha ubume (imilo) yesinye isimbiwa (okanye into ephilayo) ngenxa yobushushu kunye / okanye uxinzelelo okanye inkqubo yemichiza, umzekelo, iliso lengwe (ukutshintshwa kwe-quartz kwe-crocidolite, i-asbestos mineral); i-agate yamaplanga (indawo ye-quartz yomthi)
Ukubonakaliswa kukubuya komphezulu (nokuba kungaphakathi okanye ngaphandle) kokunye ukukhanya okuwela phezu komphezulu. Jonga neMithetho kaSnell
Ukuphinda kubonakalise utshintsho kwicala apho ukukhanya kuhamba khona xa kugqitha ukusuka kwimithombo yeendaba ukuya kwenye yobuninzi boxinaniso lwamehlo (ngaphandle kwaxa kugadla umphezulu oqhelekileyo kwimithombo yeendaba ezimbini kwi-90 °). Njengoko ukukhanya kudlula ukusuka kunqabile ukuya kwindawo yokuxinana (umz., Ukusuka emoyeni uye elityeni) ijonge kwinto yesiqhelo, ngokuchaseneyo njengoko isuka kwindawo exineneyo iye kwindawo enqabileyo ityhubele kude yesiqhelo. Ubuninzi be-Optical yipropathi entsonkothileyo ezibonisa ukuthoba ukukhanya. Jonga neMithetho kaSnell
ezo zenziwe ngokwakhiwa kwezinto (iintlenga) ezaqala ngokwaphuka ngokwasemzimbeni nangokwamachiza kwamatye awayesele ekhona emhlabeni
Ubunzima be-SG okanye ubuninzi bezinto ezibonakalayo ngumlinganiselo phakathi kobunzima bento kunye nobunzima bomthamo olinganayo wamanzi acocekileyo kwi-4 ° C (ubuninzi bamanzi) kunye noxinzelelo oluqhelekileyo lomoya. I-SG inxulumene nokwenziwa kwemichiza yemathiriyeli kunye nokudibana phakathi kweatom (ngokwenyani, ayichaphazelwa kuphela bubunzima beatom yamacandelo ngamacandelo kodwa kwanendlela ezibekwa ngayo iiathom)
kwiinkqubo ezinamacala amathandathu, i-trigonal kunye ne-tetragonal crystal system kukho enye ye-optic axis (ulwalathiso lwe-refraction eyodwa): iiminerali ezi zezi nkqubo zaziwa njenge-uniaxial (kumatye angaxutywanga i-axis ye-optic iyahambelana nenqwanqwa 'c' le-axis)